OOTDMYANMAR – OOTDMYANMAR
LOEWE X ‘MY NEIGHBOR TOTORO’
No Comments on LOEWE X ‘MY NEIGHBOR TOTORO’
Loewe is collaborating with movie director Hayao Miyazaki and Studio Ghibli foracollection with the 1988 animated classic, ‘My Neighbor Totoro’
Loewe က ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် ‘My Neighbor Totoro’ နဲ့ collection ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Hayao Miyazaki ၊ Studio Ghibli တို့နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
“The message is one of dreamy serenity and hands-on creativity—of being at one with nature and with one’s own inner child—which is especially important right now and, I think, always will be.”
“အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အိပ်မက်ဆန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှု၊ အတွင်းစိတ်ထဲက နုနယ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့ သဘာဝနဲ့ထပ်တူကျတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖန်တီးပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။”
Below are our top picks for the limited-edition capsule collection of bags, ready-to-wear and accessories celebrating Studio Ghibli’s 1988 masterpiece.
Studio Ghibli ရဲ့ 1988 ခုနှစ် အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင် နဲ့ပူးပေါင်းပြီး အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက OOTD အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အိတ်တွေ၊ ready-to-wear နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Landscape Totoro sweatshirt in cotton, $750.00
Photo via @loewe.com
Totoro plain cardholder in classic calfskin, $350.00
Totoro mini Puzzle bag in classic calfskin, $2,100.00
Landscape Totoro biker jacket in nappa, $9,050.00
Totoro small Hammock Drawstring bag in classic calfskin and linen, $2,800.00
Totoro hoodie in cotton, $650.00
Photos via @loewe.com
Dust Bunnies mini Heel Pouch in soft calfskin, $490.00
Find the full collection here at :
Tags loewe, loewextotoro, ootdmyanmar, totoro
5 FUNKY WAYS TO WEAR CO-ORDS VIA DUA LIPA
No Comments on5FUNKY WAYS TO WEAR CO-ORDS VIA DUA LIPA
Co-ords ကို Dua Lipa လို အမိုက်စားဝတ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း ၅ မျိုး
Dua Lipa isn’t justaGrammy Award-winning singer she isapop culture and musical icon. Her music is funky as her style.
Dua Lipa ဟာ ဂရမ်မီဆုရှင် အဆိုတော်သာမကဘဲ ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ဂီတကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်အဖြစ်ပါ တင်စားခေါ်ဝေါ်ထိုက်သူပါ။ Dua Lipa ရဲ့သီချင်းတွေကလည်း သူမရဲ့စတိုင်လိုပဲ အမိုက်စား အလန်းစားတွေဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Below, we curated five funky ways to wear use match top and bottom according to Dua Lipa.
အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Dua Lipa လို အပေါ်အောက်ဆင်တူကို အမိုက်စားဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
#1 PRINT SAVY
#2 ABSTRACT RAINBOW
#3 CHECKERED ORANGE
#4 CHECKERED BLUES
#5 SILKY AND MINTY
Tags coords, dualipa, dualipastyle, Fashion, ootd, ootdmyanmar
MDS OUTFITS SHWE HMONE YATI WORE THAT WE ARE OBSESSED WITH
No Comments on MDS OUTFITS SHWE HMONE YATI WORE THAT WE ARE OBSESSED WITH
OOTD MYANMAR က အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ Shwe Hmone Yati ဝတ်တဲ့ MDS outfit များ
Shwe Home Yati rarely posts on her social medias. But when she does — we can’t help but fall in love with her more. Her girly yet clean outfits are truly charming. Below, we listed her looks with MDS pieces we are obsessed with:
Shwe Hmone Yati က သူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပုံတွေတင်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ပုံတင်တဲ့အခါတိုင်းလည်း သဘောမကျဘဲမနေနိုင်ပါဘူး။
သူမရဲ့ မိန်းကလေးဆန်ပြီး သန့်ရှင်းကျော့မော့တဲ့ outfit တွေက တကယ်ကို မြင်သူငေးစရာပါ။
ဒါကြောင့် သဘောကျမိတဲ့ သူမရဲ့ MDS outfit အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo via @SHWE HMONE YATI Outfit from @mdsmyanmar
2. SEXY BLACK DRESS
3. RUFFLED NUDE DRESS
4. PATTERNED & PINK DRESS
5. PINK & RUFFLED
6. KEEP IT SHORT & NUDE
Tags Fashion, mdsmyanmar, ootd, ootdmyanmar
4 INSTAGRAM OOTDS WE SPOTTED ON BLACKPINK’S JISOO & HOW MUCH IT COSTS
No Comments on4INSTAGRAM OOTDS WE SPOTTED ON BLACKPINK’S JISOO & HOW MUCH IT COSTS
သဘောကျမိတဲ့ BLACK PINK အဖွဲ့ဝင် Jisoo ရဲ့ Instagram outfit4စုံ နဲ့ သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းများ
BLACKPINK is an exceptional girl group for many reasons. Aside from their music, they are known for their amazing fashion.
BLACKPINK ဟာ ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကျားမှုတွေနဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။ ဂီတ အပြင် သူတို့ရဲ့ အံ့ဩလောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်ကြောင့်လဲ လူသိများထင်ရှားကြပါတယ်။
Since Jisoo recently celebrated her birthday we will be choosing some of her best OOTDs from her instagram and how much they cost:
မကြာသေးခင်ကမှ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပထားတဲ့ Jisoo ရဲ့ instagram က ဝတ်စုံတွေထဲကမှ တချို့ကို ရွေးချယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း ပြောပြသွားပါမယ်။
Price: 140 USD (185,000 MMK)
Price: $733 (Around 968,000 MMK)
3. Stella McCartney Cutaway Hem Ribbed-knit Polo Shirt In Red-White
Price: $1130 (Around 1,500,000 MMK)
4. Acne Studios Kantonia Striped Distressed Knitted Sweater
Price: $456 (Around 602,000 MMK)
Tags blackpink, Fashion, jisoo, ootd, ootdmyanmar